भौतिक दुरी टाढा भएपनि क्रान्तिकारीहरुमा सम्मान र समर्थन छ ! « Media for all across the globe
नेपालमा दलित समुदायको ठूलो हिस्सा अझै कम्युनिष्ट (बामपन्थी) दर्शनमा आस्था राख्छन्। अवश्य पनि मार्क्सवाद अद्वितीय बहुउद्देश्यीय बहुजातीय दर्शन पनि हो। कुनै शंका गर्ने देखिन्न। पछिलोपल्टको चरणमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले पुष्पकमल दाहाल बाहुन जातीका भइरहेको आभास हुदैछ। बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टीको विजन र साम्यवादी लक्ष्य छोड्नु भएको अवगत नै छ। दुवै नायक कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट कोसौं टाढा गईसके! तर, अझै धेरै दलित योद्धा उनले दिएको प्रशिक्षण भुल्न सकेका छैनन्।
वर्णाश्रमको परिभाषा परिमार्जन गर्दै वर्गीय (पेशा) गरेको बुझ्न् सकेका छैनन्। जातिय वर्ण पेशाको आधारमा भनियो अनि पेशाको आधारमा जात बन्यो। जातिय व्यवस्थामा बाहुन शिखर पुरुष भएन अनि सबै अछुत। चातुर्यवर्ण्य हिन्दु धर्मको आधार स्तम्भ हो। यसै वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार जात छुटाइएको छ बुझ्नुपर्छ। यतिबेला पनि वर्गसंर्घषले मुक्ती सम्भव छ भनिरहेका छन्। असल मार्क्सवाद ल्याएको भए उहिल्यै जनयुद्धको तुरुन्तपछि राष्ट्र बिकास निकास तर्फ गतिमान हुन्थ्यो। जबसम्म दलित समस्याको समाधान हुदैन राष्ट्रको बिकासमा अवरोध रहिरहिआएको देखिनेछ। दलित मान्छे दिनहुँ मारिएका छन्। हत्या हिंसा बलात्कार भइ रहेको छ। अझै महिला अनि युवती असुरक्षित छन्।
विश्वमा फराकिलो पहुँच भएको कम्युनिष्म नेपालमा सुस्तायो। कम्युनिष्म्को असल अवलोकन गर्न सकेनन्। यिनी नक्कली कम्युनिष्ट-कांग्रेसी बाहुनहरुलाई रैथाने मान्नु छोर्नुपर्छ। ईंटको जवाफ ढुङ्गाले दिनुपर्ने समय आएको छ। यिनीहरु मान्छेको छाला ओढ्ने जङ्गली स्याल हुन्। मानवको भेषमा राक्षस। अब अर्को समयको पर्खाइमा रहनु यिनैको मानसिक राजनैतिक गुलामी स्विकार्नु हो। दलितको नाममा भत्ता खाने सत्ताधिन – तिलक परियार, छबिलाल विश्वकर्मा र जगत विश्वकर्मा यिनी सबै संसदीय व्यवस्थामा चुपचाप बसिरहेका दलाल हुन्।
दलितका असल अपराधी हुन्। मधेसका दलित न्यायप्रेमीहरुलाई सामाजिक अभियन्ताहरुलाई सलाम गर्छु। हकहित अधिकारको लागि तुरुन्त सडकमा आंदोलन ल्याउन्छन र विकरालरुपमा एकताबद्ध हुन्छन्। यसैगरी हाम्रा पश्चिमेली दलित समुदायले गरेको भए आजएस्तो अवस्था हुन्थेन होला! विगतमा भएका घटना Re-open र आजसम्म भइरहेको जातिय हिंसाको दु:खद घटना चर्किलोरुपमा सडक देखि संसद सम्म। संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय पाउनु विवादित बनाईराख्नु पर्छ। कंचनपुरकि पीडित बैनी निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्यामा समग्र समाज सहित दलित समाज आन्दोलनमा आबद्ध भएन। ब्राह्मणवादहरुले जबर्जस्त चर्किलो आन्दोलन गरिरहेका थिएन। निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन र आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन मजबुतीले गरेन। आंदोलन महिनों लम्बिने गरि रुपरेखा तैयार पारेन।
दम्भ र जमातको शक्ति दलित जमातलाई अप्रत्यक्षरुपले देखाए। किन्तु यतिबेला नबराज विश्वकर्मा लगायत मृतक भाइहरु, मधेसका पीडित शम्भु सदा, अङ्गीरा पासीको जघन्य हत्यामा तुरुन्त आयोग गठन गर्नु षड्यन्त्रको अर्को भाग हो येस्तो बुझ्न् पर्छ। यदि, आयोग गठन केही समयउपरांत भएको भए दलित एकता अझै बलियो देखिने थियो। यिनिसबै कुरो बुझेर हो आयोग बनाएको। कुनै न्याय गर्नु समिती गठित होइन। दलित आंदोलन बलियो नहोस्। दलित एक ठाँउमा नआउन भनेर हो न्याय कमेटी गठनको षड्यन्त्र। ओली “बा” तिम्रा हरेक पाइला जनताले बुझेका छन्। गृहमन्त्री बादल, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल बचाउनु खोज्नु भएको आम चुनाबमा देखिन्छ। जनताले तिमिलाई बाटो देखाउन्छ।
सबै क्रातिन्कारी साथीहरू आन्दोलनमा छौं। सबैले सक्ने सहयोग गरेका छन्। आर्थिक, भौतिक, नैतिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ। यस् दलित क्रान्तिमा सबै संगसगै हुनुपर्ने हो। तर, क्षमा चाहान्छु प्रवासी हुनाले अभागी कर्म रहेछ। हामी प्रवासी दाजुभाइ शारीरिक रुपले आन्दोलनमा सहभागी हुन सकेनौं। तर, क्रान्तिमा हाम्रो १०० % सहमती छ। तपाईंहरु सामाजिक न्यायको लागि लकडाउन नमान्नेगरि सडकमा उत्रिन भएको छौं। हामी यता सामाजिक दुरी बनाइ – भारत सरकारको आदेश पालन कडाईका साथमा गर्दै छौं। हामीले सामाजिक सन्जालको माध्यमबाट विरोध गरिरहेका छौं।
क्रान्तिमा कसैले बन्दुक, कसैले राशन, कसैले झण्डा-डण्डा, कसैले कला-संस्कृत झल्काउने, कसैले नुक्कड नाटक, कलम, गीत, नारा-जुलुस सबै गरिरहनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो विरोध प्रदर्शन सामाजिक सन्जाल (फेशबुक) माध्यमबाट रहिरहने छ। कोरोना महामारीको लकडाउनले प्रवासमा Symbolic विरोध गर्नु असमर्थ हुनाले हामी सबै प्रवासी दाजुभाइ क्षमाप्रार्थी छौं…। सामाजिक क्रान्तिको मशाल कहिले नबुझेर दिर्घगामी रहोस्। जय दलित एकता। जय भिम।